टिकटकमा भाइरल ४० लाखमा बनेको गाउँले घर कसको हो ? - Nepali in Australia
July 1, 2021 autherLeaveaComment on टिकटकमा भाइरल ४० लाखमा बनेको गाउँले घर कसको हो ?
काठमाडौ । नयाँ सामाजिक सञ्जाल भिडियो प्लाटफर्म टिकटकमा यो घर खुबै भाइरल बनेको छ । यो घर बनाउँन ४० लाख लागत लाग्यो भन्दा जो कोहीले पत्याएका छैनन् । यो घर चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट नजिकै रहेको ठिमुरामा बनेको छ । यो घर अहिले अरु सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भइरहेको छ। नारायणगढ बजारबाट करिब ५ किलोमिटरका दूरीमा रहेको ठिमुरा भन्ने ठाउँमा त्रिशूली नदीको आडैमा यो सुन्दर घर देख्न सकिन्छ।
यो हाडजोर्नीको स’मस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि चितवनमा चर्चा कमाएका डाक्टर प्रमोद लामिछानेले बनाएको घर हो । डाक्टर लामिछानेको पुर्ख्यौली घर लमजुङको राइनास–८ हर्राबोट हो । २०७२ सालमा आएको भूकम्पले उनको मात्रै नभएर गाउँका प्रायःको घर भत्कायो। ‘आफू जन्मे–हुर्केको, पढे–खेलेको त्यो घर गुमाउनुपर्दा लामिछानेलाई असाध्यै पीडा भएको रहेछ ।
बुबाले बनाएको पहाडी मौलिकता झल्कने त्यति राम्रो घरको कल्पना गरेर नै उनले यो घर बनाएका रहेछन् । मौलिक शैलीमा केही नयाँपन दिएर यो घर तयार पार्न इन्जिनियर साजन अधिकारीले काम गरेका छन्। २ महिनामा तयार भएको यो घरमा ७ वटा कोठा छन्। भुइँ तलामा तीन, दोस्रोमा तीन र तेस्रो तलामा एउटा हल कोठा छ। यो घर हेर्दा ठ्याक्कै पहाडी शैलीको देखिए पनि निर्माणका क्रममा आधुनिक विधि र प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ।
पिलर, गारोलगायतका संरचना तयार पार्न कंक्रिटकै प्रयोग गरिएको छ। फलामे डण्डी नै राखिएको छ । घरको बार्दली, भर्‍याङ, दलिन, डाँडा, भाटालगायतको निर्माणमा साल र वन सिसौका काठको प्रयोग गरिएको छ। २० वटा आँखीझ्याल छन्। तेस्रो तल्लाको चारैतिर राखिएका बार्दली निकै आकर्षक देखिन्छन्। यो घर तयार पार्न ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको लामिछानेले बताएका छन् ।
उनले यो बनाउँन ४० लाख खर्च गरे भन्दा सामाजिक सञ्जालमा नपत्याउनेहरु पनि धेरै छन्। घरको डिजाइन गरेका इन्जिनियर अधिकारीका अनुसार यो घर हेर्दा ठ्याक्कै पहाडी शैलीको देखिए पनि निर्माणका क्रममा आधुनिक विधि र प्रविधिको पनि प्रयोग गरिएको छ। पिलर, गारो लगायतका संरचना तयार पार्न कंक्रिटकै प्रयोग गरिएको छ।
उनीहरू पेशाले डाक्टर भए पनि यत्तिमै अडिन चाहेनन्। पर्यटन क्षेत्रमा पनि केहीगर्ने उद्देश्यले ठिमुरामा त्रिशूलीको किनारमा रहेको करिब चार बिघा जमिन खरिद गरे। २०४५ सालदेखि लब्ली रिसोर्ट सञ्चालन भएको ठाउँ केही वर्षदेखि बन्द थियो। भूकम्पले संरचना समेत भत्काइदिएपछि यसै थन्किएको क्षेत्र खरिद गरेर लामिछाने दम्पतीले रिसोर्ट स्थापना गर्न थाले। ढुंगैढुंगाले बनेको २५ वटा भिल्लासहितको ठिमुरा रिसोर्ट अहिले सञ्चालनको तयारीमा छ।
देशको अवस्था राम्रो हुँदै गए दसैंसम्ममा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। पहाडी शैलीमा बनाइएको घर ठिमुरा रिसोर्टसँगै जोडिएको छ। ‘यहाँ बस्न आउने पाहुनाले केही नयाँ कुरा देखून् भन्ने पनि लाग्यो, मेरी श्रीमतीको पनि केही नयाँ गरौं, केही राम्रो काम गरौं भन्ने उद्देश्य थियो,’ ३९ वर्षीय डाक्टर लामिछानेले भने, ‘हामी दुबै जनाको अथक मेहनतले अस्पताल र रिसार्ट यहाँसम्म आइपुगेको छ।’
रिसोर्टलाई दुईतर्फ जंगलले घेरेको छ, एकतर्फ त्रिशूली बग्छ, एकतर्फ चेपाङ समुदायको बस्ती छ। चितवनको काउले, सिद्धी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय केही वर्षदेखि यहाँ स-साना झुप्रा बनाएर बस्दै आएका छन्।डाक्टर लामिछानेले रिसोर्ट बनाउँदा तिनै चेपाङ समुदायलाई रोजगारी दिएका थिए। ढुंगा, काठ र बाँसलाई जोडेर तयार पारिएको रिसोर्ट निर्माणमा ८० प्रतिशत चेपाङ सहभागी थिए।
‘हाम्रो रिसोर्टमा बस्न आउनेले शान्त अनि मनोरम वातावरणको महसुस गर्न सकून् । बालकदेखि वृद्ध वृद्धासम्म रमाउन सकून् भनेर नेपालको मौलिक शैलीको भरपुर प्रयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रिसोर्ट भित्रैबाट बग्ने सानो खोलालाई चिटिक्क बनाएर सजाएका छौं, बगैंचा, आकर्षक स्विमिङ पुल, जंगलको वातावरण, रिसोर्टभित्र राखिएका काठ, ढुंगाका मुर्तिहरूले जो कोहीलाई लोभ्याउन सक्छ।’
२०५७ सालमा डाक्टर बनेका लामिछानेले करिब ५ वर्ष काठमाडौंको बिएन्डबी अस्पतालमा काम गरेका छन् । २०६७ सालमा उनले एमडी, एमएस गरे। सोही वर्ष उनले विवाह गरेका थिए । २०६८ यता उनी चितवनमा अस्पताल सञ्चालक र हाड जोर्नी तथा नसा रोग विषेशज्ञका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनले भूकम्पले लमजुङको घर भत्काएपछि त्यस्तै शैलीको घर बनाउने सपना ६ वर्षपछि पूरा भएको बताए। खबरहाउस बाट